အဖေ ခေါ်ခ …တစ်​ရက်​ ၆၀၀ ကျပ် !!! (ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ) – Alinyaung
အဖေ ခေါ်ခ …တစ်​ရက်​ ၆၀၀ ကျပ် !!!
ကိုထွန်း နဲ့ မကြည်ပြာ ဆိုတဲ့ လင်မယား သားသမီး သုံးယောက်မွေးဖွားထားတယ်ပေါ့ !
ကိုထွန်းဟာ အရက် ကျွန်ဖြစ်သွားပြီ !အရက် ကလွဲလို့ ..သူ့ဘဝမှာ ဘာမှမရှိ !မကြည်ပြာ ကိုလည်း သူဂရုမစိုက်တော့ !သားသမီးသုံးယောက် ကိုလည်း..စိတ်မဝင်စားတော့ !
မကြည်ပြာ ဆီကရမဲ့ ..အရက် ဖိုး မနက် ၂၀၀၊
နေ့လည် ၂၀၀ နဲ့ ညနေ ၂၀၀
၊ဒါပဲ….သူ သိတော့တယ် !မကြည်ပြာ ကတော့..ခေါင်းရွက်ဗျတ်ထိုးဈေးသည်ဘဝနဲ့မိသားစု ကိုဦးဆောင်ပြီး ကလေး တွေ စားစရိတ် ကျောင်းစားရိတ် အပြင်..ကိုထွန်း အတွက်​ အရက် ဖိုးကိုပါနေ့စဉ် ပင်ပန်းကြီးစွာရှာဖွေနေရတယ် !
ဒါကို..မကြည်ပြာ ရဲ့ အစ်မ တွေ အဒေါ်တွေက မကျေနပ်ကြတော့ဘူး !ဒါနဲ့..မကြည်ပြာ ကို ခေါ်ဆူကြတယ် !ညည်း ဒီလောက် ယောက်ျား ရှားနေလား !ညည်း ဒီလောက် ယောက်ျား အပေါ်ချစ်​နေတာလား !ညည်း ဒီလောက် အရှက်မဲ့နေရလား !
ဆွေမျိုး​ တွေပါ..သိက္ခာ ကျရတယ် !သူရှိနေလည်း…ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်စားနေရတယ် !သူမရှိတော့ရင်လည်း..ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်စားရမှာပဲလေ !ဘာလို့ …ဒီလောက်သုံးမရတဲ့ အရက်သမား ကို အရက်ဖိုးပေး ရှာကျွေးပြီး သူနှိပ်စက်​တာ ခံနေရတာလည်း ?ညည်း..သူနဲ့ မကွာသေးဘူးလား ?ဘာလား​ပေါ့ ?….ညာလား​ပေါ့ ?
မကြည်ပြာ က..အဒေါ်တွေ ၊ အစ်မတွေပြောသမျှကို အေးဆေးစွာနားထောင်​နေလိုက်​တယ်​…..ပြီးမှ…!အဒေါ်တို့ အစ်မတို့ပြောတာ မှန်​ပေမယ့်​ ကိုထွန်း ကို…ကျွန်မ မကွဲနိုင်ပါဘူး !ယောက်ျား ရှားလို ..သူ့ကို ချစ်လွန်းလို့ ကျွန်မ ဒုက္ခတွေခံပြီး…သူနဲ့ပေါင်းနေတာ..မဟုတ်ပါဘူး !ကျွန်မမွေးထားတဲ့ က​လေး သုံးယောက်မှာ…သူများတွေနဲ့တန်းတူ အဖေ လို့ ခေါ်ခွင့်ရဖို့ !
သူများကလေးတွေနဲ့တန်းတူ..အဖေလို့ခေါ်လိုက်ရင်”ဟေ”လို့ပြန်ထူးပေးဖို့ !သူ့ကို ကျွန်မသားသမီးလေးတွေအတွက်အဖေခေါ်ခ…ပေးနေတာပါ !ကျွန်​မ အရွယ်​ ရှိ​သေးတာ..​နောက်​ အိမ်​​ထောင်​ ပြုလို့ရနိုင်​တာက မှန်​​ပေမယ့်​ကျွန်​မက​လေး​တွေအတွက်​ ..ပ​ထွေး ကို “အ​ဖေ” လို့ အ​ခေါ်မခံနိုင်​ပါဘူး !
ကိုထွန်း ကိုပေးနေတာ..အရက်ဖိုးမဟုတ်ပါဘူး !ကျွန်မ…သားလေးတွေ သမီးလေးတွေအတွက်…အဖေ ခေါ်ခ ပေးနေတာပါ !အဒေါ်တွေအစ်မ တွေမှာ..ခေါင်းငိုက်စိုက် ကျသွားပါတော့တယ် !
မကြည်​ပြာ..မှန်​လား / မှားလား !!
(ကျေးဇူးပြု ပြီး..စာဖတ်​သူရဲ့ သ​ဘော
ထားအမြင်​​လေး ​ရေး​ပေးခဲ့ပါ။ လွတ်​လပ်​စွာ အမြင်ကွဲပြားခွင့်​ရှိပါတယ်​ !!)
အဖေ ချေါခ …တဈရကျ ၆၀၀ ကပျြ !!!
ကိုထှနျး နဲ့ မကွညျပွာ ဆိုတဲ့လငျမယား သားသမီး သုံးယောကျမှေးဖှားထားတယျပေါ့ !
ကိုထှနျးဟာ အရကျ ကြှနျဖွဈသှားပွီ !အရကျ ကလှဲလို့..သူ့ဘဝမှာ ဘာမှမရှိ !မကွညျပွာ ကိုလညျး သူဂရုမစိုကျတော့ !သားသမီးသုံးယောကျ ကိုလညျး..စိတျမဝငျစားတော့ !
မကွညျပွာ ဆီကရမဲ့ ..အရကျ ဖိုး မနကျ ၂၀၀၊
နလေ့ညျ ၂၀၀ နဲ့ ညနေ ၂၀၀
၊ဒါပဲ….သူ သိတော့တယျ !မကွညျပွာ ကတော့..ခေါငျးရှကျဗတျြထိုးဈေးသညျဘဝနဲ့မိသားစု ကိုဦးဆောငျပွီး ကလေး တှေ စားစရိတျ ကြောငျးစားရိတျ အပွငျ..ကိုထှနျး အတှကျ အရကျ ဖိုးကိုပါနစေ့ဉျ ပငျပနျးကွီးစှာရှာဖှနေရေတယျ !
ဒါကို..မကွညျပွာ ရဲ့ အဈမ တှေ အဒျေါတှကေ မကနြေပျကွတော့ဘူး !ဒါနဲ့..မကွညျပွာ ကို ချေါဆူကွတယျ !ညညျး ဒီလောကျ ယောကျြား ရှားနလေား !ညညျး ဒီလောကျ ယောကျြား အပျေါခဈြနတောလား !ညညျး ဒီလောကျ အရှကျမဲ့နရေလား !
ဆှမြေိုး တှပေါ..သိက်ခာ ကရြတယျ !သူရှိနလေညျး…ကိုယျ့ဟာကိုယျ လုပျစားနရေတယျ !သူမရှိတော့ရငျလညျး..ကိုယျ့ဟာကိုယျလုပျစားရမှာပဲလေ !ဘာလို့…ဒီလောကျသုံးမရတဲ့ အရကျသမား ကို အရကျဖိုးပေး ရှာကြှေးပွီး သူနှိပျစကျတာ ခံနရေတာလညျး ?ညညျး..သူနဲ့ မကှာသေးဘူးလား ?ဘာလားပေါ့ ?….ညာလားပေါ့ ?
မကွညျပွာ က..အဒျေါတှေ ၊ အဈမတှပွေောသမြှကို အေးဆေးစှာနားထောငျနလေိုကျတယျ…..ပွီးမှ…!အဒျေါတို့အဈမတို့ပွောတာ မှနျပမေယျ့ ကိုထှနျး ကို…ကြှနျမ မကှဲနိုငျပါဘူး !ယောကျြား ရှားလို ..သူ့ကို ခဈြလှနျးလို့ကြှနျမ ဒုက်ခတှခေံပွီး…သူနဲ့ပေါငျးနတော..မဟုတျပါဘူး !ကြှနျမမှေးထားတဲ့ ကလေး သုံးယောကျမှာ…သူမြားတှနေဲ့တနျးတူ အဖေ လို့ချေါခှငျ့ရဖို့!
သူမြားကလေးတှနေဲ့တနျးတူ..အဖလေို့ချေါလိုကျရငျ”ဟေ”လို့ ပွနျထူးပေးဖို့!သူ့ကို ကြှနျမသားသမီးလေးတှအေတှကျအဖခေျေါခ…ပေးနတောပါ !ကြှနျမ အရှယျ ရှိသေးတာ..နောကျ အိမျထောငျ ပွုလို့ရနိုငျတာက မှနျပမေယျ့ကြှနျမကလေးတှအေတှကျ ..ပထှေး ကို “အဖေ” လို့ အချေါမခံနိုငျပါဘူး !
ကိုထှနျး ကိုပေးနတော..အရကျဖိုးမဟုတျပါဘူး !ကြှနျမ…သားလေးတှေ သမီးလေးတှအေတှကျ…အဖေ ချေါခ ပေးနတောပါ !အဒျေါတှအေဈမ တှမှော..ခေါငျးငိုကျစိုကျ ကသြှားပါတော့တယျ !
မကွညျပွာ..မှနျလား / မှားလား !!
(ကြေးဇူးပွု ပွီး..စာဖတျသူရဲ့ သဘော
ထားအမွငျလေး ရေးပေးခဲ့ပါ။ လှတျလပျစှာ အမွငျကှဲပွားခှငျ့ရှိပါတယျ !!)